Iindaba -Iindlela ezihamba ngayo kwizibane zorhwebo: Ukungafani kunye nokusebenza ngokukuko
Iindlela zokukhanya kwezorhwebo: Ukungafani kunye nokusebenza ngokukuko
Ixesha ledijithali ibe yinyani yenyani kwihlabathi le Ivenkile. Ukuvela korhwebo lwe-elektroniki kufuna ukuba kutshintshwe indlela kuyilo lwezicwangciso zorhwebo. Kule nyaniso intsha, yeyiphi indima edlalwa ziivenkile ezibonakalayo?
Iindawo zentengiso zemveli zijamelene nomceli mngeni ongazange ubonwe ngaphambili: Ukudalwa kwamava okwahlula ahamba ngaphaya kokubonisa kunye nokuthengiswa kweemveliso. Ukuvuselela iimvakalelo zabathengi banokuba yinto esisiseko yokutsala umdla wabo: Oku kubandakanya izinto ezinjengevumba, ubushushu kunye nokukhanya. Iinkcukacha zibalulekile.
Ngale ndlela, ukuthengisa okubonakalayo kubonisa eyona nto iphambili kwihlabathi lentengiso. Uqeqesho oludibanisa isayikholoji, ukuthengisa, uyilo kunye nemiba yezobuchwephesha, ngeenjongo zokukhuthaza ukusetyenziswa kwindawo yentengiso ngaphandle kokuphulukana nokugxila kwiimpawu zorhwebo.
Utshintsho lwengqondo kwizibane zorhwebo
Ngaphandle kokubaluleka kwentengiso ekwi-Intanethi, iivenkile ezibonakalayo ziyaqhubeka nokubonisa ishaneli yokuthengisa ebalulekileyo ngenxa yamandla onxibelelwano ngqo nabathengi. Iindawo zorhwebo zimele ubume beempawu ngoyilo lobuhlobo olulungiselelwe abathengi. Ke ngoko, ukukhanya kudlala indima ebalulekileyo ekwenziweni kweekhonsepthi ezintsha zentengiso. Izibonelelo zayo eziphambili zezi:
● Ukudala uphawu: Izibane ezenzelwe ukungqinelana nobuntu kunye neenjongo zebrendi ziya kunceda ukwakha indawo eyahlukileyo enokuthi ichongwe ngabathengi.
● Ukulungiswa: Izibane kufuneka ziphucule izinto ezibonisiweyo, kodwa kubalulekile ukuba iyanceda ukwandisa ukujikeleza kwindawo yentengiso. Ngaphandle kweekhrayitheriya ezinxulumene nokusebenza kwamandla, ukhetho lwesibane esifanelekileyo kwinto nganye ebonisiweyo kufuneka lube ngumqolo wesicwangciso esihle sokukhanyisa kuyo nayiphi na indawo yorhwebo (impahla, ukutya, iivenkile zetekhnoloji, njl.). Singasebenzisa imithombo yokukhanya ngesibane esithile sokukhanya ngokusebenzisa ii-LED ezikhethekileyo ukuphucula imibala emhlophe, into eluncedo kakhulu kwiivenkile zefashoni, okanye ukusebenzisa imibala eqaqambe ngakumbi enje ngombala obomvu ukongeza imbonakalo yenyama, okanye eluhlaza okwesibhakabhaka, ethi ziluncedo kakhulu ekuziseni ezona ntlanzi zibalaseleyo.
● Utshintsho: Uyilo lwezibane zorhwebo lunokubonelela ngeendlela zokuqinisa indawo zorhwebo kunye nemiboniso. Ukusetyenziswa kwesibane esiguqukayo esiguqula ubushushu bombala waso (i-CCT) ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, i-shades ezixhaphakileyo okanye nexesha losuku, zinokubangcono kwizithuba ze-dinamise. Obu buchule bunokunceda ukuhambisa ukuhamba kwabasebenzisi evenkileni kwitrafikhi ephezulu, okanye ngokuchaseneyo, ukutsala abathengi xa ivenkile ithe cwaka, ngokufanayo nendlela ezinye izinto ezisetyenziswa ngayo kwi-neuromarketing, umzekelo, umculo.
Uyilo lwezibane zorhwebo ezihlengahlengiswe kwisithuba ngasinye
Ukukhanya kweendawo eziqhelekileyo kunye neepaseji
Ngokubanzi, ukukhanya kwezi ndawo kugxile ekusebenzeni, njengenxalenye yazo indlela efanelekileyo yokukhanyisa iya kuba nefuthe ngqo kubathengi bentuthuzelo kwaye ke, kwizigqibo zabo zokuthenga, ngokuphucula amava asesitolo. Ngale ndlela, uhlengahlengiso yinto esisiseko kwaye ke, kufuneka kuthathelwe ingqalelo oku kulandelayo:
● Ukugcwala kwabantu
● Ukusetyenziswa kwezithuba
Kungcono ukudibanisa umaleko wokukhanya okungafaniyo kunye nezibane zokukhanyisa ukukhokela ingqalelo yabasebenzisi kwizinto ezithile.
Ivenkile yokukhanyisa ifestile
Iifestile zeevenkile zizinto ezinomtsalane kumsebenzisi, ngenxa yoko ukubaluleka kokuyilwa kwezibane kwezi ndawo, ukuvelisa into evuyisa nengatsala umdla.
Ukusuka kwindawo yokujonga, Ukukhanya kwefestile yevenkile kufuneka kufezekise eyona mfuno iphambili yokuveliswa kombala ngesalathiso sombala ophezulu (CRI) eyenza umbono ochanekileyo weemveliso ngaphandle kokulibala malunga necandelo lobuhle. Kukwabalulekile ukuba neenkqubo zokukhanyisa eziguqukayo neziguquguqukayo ezinje ngee-luminaires zomkhondo, eziza kongeza ukuguquguquka kufakelo, njengoko zinokuhanjiswa ukuze zilungelelanise notshintsho loyilo olwenzeka kumaxesha ahlukeneyo. Ukongeza, ukufakelwa kwezikhanyiso ezinamazinga ahlukeneyo akhanyayo kunye nokukhanya kuya kwenza ukuba kube nakho ukwenza iziphumo ezingaphezulu okanye ezingaphantsi ngokudlala ngezithunzi zobunzima obahlukeneyo ngokwesiphumo esifunwayo, oko ke kujongana nale nto ibhetyebhetye yokukhanyisa.
Xa uthatha isigqibo sokukhanyisa ivenkile, kubalulekile ukuba ujonge kwezi njongo zilandelayo:
● Ukomeleza umtsalane weemveliso. IiLuminaires ezenza ukudityaniswa kweemodyuli ezahlukeneyo lukhetho olunomdla kakhulu. Ukuguquguquka kofakelo lwabo kwenza ukuba kube lula ukuziqhelanisa nentengiso ebonakalayo ebonakalayo
● Ukukhokela umthengi kwisithuba nokubenza bazive bekhululekile. Isicwangciso esisebenzayo sokukhanyisa kufuneka silungelelaniswe nohambo lomthengi lophawu, Oko kukuthi, inkqubo ehamba ngayo umthengi ngaphambi kokufumana imveliso okanye inkonzo. Kwimeko yedijithali entsha, olu hambo lungaqala kwizikhundla ezikwi-Intanethi, ke ukudityaniswa kweshaneli kubalulekile. Ngokwahluka kobunzulu bokubengezela okukhanyayo okanye ubushushu bombala wokukhanya okusetyenzisiweyo, sinokuhambisa umthengi siye kwiindawo ezinomdla ezijongwa luphawu olufanelekileyo kakhulu kumava okuthenga ehlabathi ngendlela engamanzi neyendalo.
● Chonga iindawo ezahlukeneyo kunye neendawo zorhwebo. Iinkqubo zolawulo lwezibane ezikrelekrele ziluncedo olukhulu, zenza ukuba ukwahluka ekukhanyisweni kwenziwe kwizixhobo esinye sedijithali ngokweemfuno ezithile, ngaphandle kwesidingo sokubuyisela ukukhanya okanye ezinye izinto zofakelo. Ukuziqhelanisa nolungelelwano ngundoqo kuyilo kunye nokonga iindleko.
Kwisibane, sinamava abanzi asebenzisanayo namaqela anoxanduva lweeprojekthi zokukhanya kwezorhwebo. Kule ndawo, songeza ixabiso kwiprojekthi nganye ngokuphuhlisa izisombululo zokukhanyisa ezenziwe kwisicelo ngasinye.